मुसा अर्थात् अख्तियार !
तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको रवैयाका कारण उतिवेला ‘छुचुन्द्रो’ बनेको अख्तियार अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सामु ‘मुसो’ भएको छ।
आस्था राउतलाई हिरासतमा लिदा धुमिल बन्याे प्रहरी छबि
एक मात्र शब्द ‘माफी’ बाट हल हुनसक्ने सामान्य भनाभन फौजदारी अपराध सरह मानेर आस्थालाई हिरासतमा लिने रवैयाले प्रहरीकै छवि धुमिल बनेको छ।
शहीद परिवारको सत्यकथा
आदिभक्तका दुई पत्नी मार्फत पाँच छोरा र चार छोरीको प्रवासमा जीविकोपार्जनको संघर्ष, जेठा छोरा धर्मभभक्तको प्रजापरिषद्सँगको आबद्घता र राणाशाही विरुद्धको बगावत पुस्तकको ‘क्लाइमेक्स’ हो।
‘छपाक' : भारतमा महिलाविरुद्ध, नेपालमा नागरिक अधिकारविरुद्ध आफ्ना नैसर्गिक र मौलिक अधिकार रक्षाका लागि सबै तह र तप्काका नागरिक गोलबद्ध हुनैपर्छ । दीपिका झै‌ं पर्दाका नायक–नायिका परिआउँदाका नायक बन्नु जरूरी छ ।
नयाँ वर्षमा प्रणको आदत तपाईंले आफ्ना परिवारजन वा इष्टमित्रलाई नयाँ वर्षको प्रण सोध्नुहुन्छ भने सधैं सकारात्मक उत्तार पाउनुहुन्छ, जुन अक्सर स्वास्थ्य र समुन्नतिसँग जोडिएको हुन्छ।
भ्रमण वर्षका भ्रम वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक छटा, विपुल जैविक विविधता र जीवन्त संस्कृतिको धनी तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा १० लाख हाराहारी पर्यटक मात्र आउनु चिन्ताको विषय हो ।
उदार ‘स्पेस’ मास्ने अर्को विधेयक मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयक जस्तै ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन विधेयक’ एउटा यस्तो सरकारी प्रपञ्च हो, जसले नागरिकको घाँटी अँठ्याएर मुलुकमा ‘पुलिस स्टेट’ स्थापना गर्ने अभीष्ट बोकेको छ।
सागबाट ‘स्वर्ण युग’ अनेकौं संशय र सकसका बीच आयोजित साग खेलाडीको अब्बल प्रदर्शनकै कारण प्रकारान्तरमा मुलुकवासीका लागि सुखानुभूति दिलाउने सुनौलो अवसर बन्न पुग्यो।
चमत्कारको चास्नीमा अन्ध–अनुयायी धर्मको नाममा हुने कुकृत्यका निम्ति गुरुहरू मात्रै दोषी होइनन्, तिनका धरातल र ज्ञानको स्तर नहेरी ‘चमत्कार’मा विश्वास गर्नेहरू पनि उत्तिाकै भागीदार छन्।
अब अदृश्य आगो अँगेनो वा ग्याँस चुल्होमा आगो बालेर खाना पकाउँदै आएका हामी विद्युतीय चुल्होको युगमा प्रवेश गर्दा भर्भराउँदो ज्वाला त हराउने नै छ, भाँडाका रूप पनि फेरिनेछन्।
प्रधानमन्त्रीको अर्को प्रहसन
प्रम ओलीले यतिवेला आफू र मुलुककै लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको शक्ति हस्तान्तरण हो, राजनीतिक विश्राम र योग्यका निम्ति मार्गप्रशस्त ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रो जीवनको कामना
भ्रममा पर्न नहुने कुरा के हो भने देशका कार्यकारीको दायित्व उनको नीतिगत कार्यसम्पादन र शिष्टाचार भेटमा मात्र सीमित रहँदैन । उनी मानसिक रूपमा जति चुस्त रहनुपर्छ, शारीरिक रूपमा पनि त्यति नै तन्दुरुस्त रहनु आवश्यक छ । केन्द्र र सरकारी निवासको सुविधाबाट निस्केर मुलुकका दूरदराजसम्म पुग्दै अभाव र पीडामा बाँचेका देशवासीको क्षमकुशल सोध्न सक्नुपर्छ ।
किस्सा, मिथक र देवत्वकरणमा विनिर्मित महाकविको व्यक्तित्वलाई पछिपछिसम्म सान्दर्भिक बनाइराख्ने हो भने उनका विश्वजनीन रचनाको शक्ति र सामर्थ्य चिन्न र चिनाउन सक्नुपर्छ ।
दस्तावेज शेखर खरेल
कांग्रेसमा ‘हिन्दूराष्ट्र’को अजेण्डाः कसको स्वार्थ ?
याेगेश भट्टराईलाई दुर्लभ अवसर
प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक छनोटमा मन्त्री बनेका योगेश भट्टराई समक्ष भोलिका लागि पनि आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ।
'रअ' काे राजनीति र नेपाल–भारत सम्बन्ध
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट सिर्जित तिक्तताका कारण बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उँचाइमा पुर्‍याउने दायित्व हिजो सरकारको नेतृत्व गरेकै पात्रहरूको काँधमा आएको छ।
अंकलाई प्राथमिकता दिने परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरेर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा अक्षरांकन पद्धति लागू गरिए पनि शिक्षाप्रतिको आम सोचाइ र व्यवहार हिजोकै जस्तो छ।
नियन्त्रणमुखी अभीष्टबाट प्रेरित मिडिया विधेयक विरुद्ध डटेर लड्नुपर्ने प्रेस जगतले आफ्नो व्यावसायिक साख बचाइराख्न स्वयंमा निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको यूरोप ‘प्लेजर ट्रिप’
राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउँदै गरिने प्रोटोकल र प्रयोजन प्रतिकूलका यस्ता भ्रमणबाट मुलुकलाई कुनै फाइदा पुग्दैन । सुविधा र विलासको यस्तो भ्रमणलाई ‘प्लेजर ट्रिप’ भनिन्छ । आत्मरति र सुविधाभोगको लालसाका कारण हुने यस किसिमको भ्रमणको कुनै उपलब्धि हुँदैन ।
अतिथिलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर हिरासतमा कैदीलाई जस्तो केरकार गर्दै आफ्नै कुरो थोपर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारितामा शिष्टता र धैर्यको अभाव देखाउँछ।
‘ज’ माने जमीन, ‘झ’ माने झ्याप !
नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गरेर तिलस्मी सपना बाँडिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली महत्वपूर्ण कुरामा चुकिरहेका छन्।